ဖြိုး အလ်ဝိုင်: ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ ဘာလဲ?
ဒီနေရာမှာပဲ ခင်ဗျားတို့လာကြည့်ကြ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ ဗုဒ္ဓ၀င်ကျမ်း ပိဋကတ်ကျမ်း (သိုင်းဝတ္တူ) မလေ့လာခင် မဖတ်ခင် ဘာသာခြား ဘာသာမဲ့ များ ကျွန်တော့် စီဘောက် ကို လာကြည့်ကြပါ.. ဘာတွေ ပြောလို့ပြောမှန်းမသိဘူးဗျာ တနေ့တနေ့ ဆဲတာတွေက မွန်းထူနေတာပဲ... ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဆန့်ကျင့်ရေး ဘလော့ဂ်တခုပဲ လုပ်ရသေးတယ်. သူတို့လုပ်တာတဲ့ ဘလော့ဂ်တွေအများကြီးပဲဗျာ မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး ဘလော့ ခရစ်ယာန် ဆန့်ကျင်ရေး ဘလော့ အနောက်ဥရောပနိူင်ငံများ ဒီမိုကရေစီ ဆန့်ကျင်ရေး ဘလော့ စုံနေတာပဲဗျာ... သူတို့ဘလော့ဂ်တွေကို သွားကြည့်ကြည်ပါအုံး ဘယ်သူသွားဆဲလဲ.. တနေ့တနေ့ ဘလော့ဂ်ကို ကြည့်လို့ စိတ်ချမ်းသာစရာ တကွက်မှ မ၇ှိဘူး ကျတော်ကတော့ ကျတော့်ရဲ့ ခံယူချက်ကို အပျောက်မခံဘူး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဖျက်ဆီးမယ်....
ဒီလိူုဆဲလေ ကျွန်တော့်၇ဲ့ ခံယူချက်က ပြင်းထန်လေပဲ ကျွန်တော့်ကို အမျိုးမျိုးထင်ကြေးပေးကြတယ် ကျွန်တော့်ကို မွတ်စလင်မ်လို့ တချို့ထင်ကြတယ် ခရစ်ယာန်လို့ ထင်ကြပြန်ရော နောက်စစ်အစိုးရလို့လည်း ထင်ကြပြန်ရော ထင်ရုံနဲ့ ပြီးသွားမှလားလို့ အောက်မေ့တယ် ဆဲပါလေရော စိတ်ထင်တာ အကုန်လိုက်ဆဲ သြော် ဗုဒ္ဓဘာသာ တော်တော်တရားကျဖို့ ကောင်းတယ်.... တော်တော်လည်း တရားကျဖို့ ကောင်းသလို တော်တော်လည်း အောက်တန်းကျပါတယ်.... သြော်ဗုဒ္ဓဖာသည်တွေများ ဒီပြင်ဘာသာဝင်များကိုလည်း အားနာရကောင်းမှန်မသိကြပါဘူး...
ကျွန်တော့်ကို တယောက်မှ အဖြေမပေး နိူင်ကြဘူး ဆဲပဲ ဆဲတတ်တယ်.. ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကို ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ (၁၀)ယောက်မှာ (၉)ယောက်သည် မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း ဆဲတတ်ကြသည် ဆိုတဲ့ ကျွန်တော့်စကားက တကယ်မှန်တာ.... ကျွန်တော့် ကို အဲဒီလို ဆဲတယ်အထဲမှာ ငနာဘုန်းကြီးများကတော့ ထိပ်ဆုံးကပေါ့.. ငနာဘုန်းကြီးများ မပါဘဲ မနေဘူး လူမြင်ကွင်းမှာတောင် သင်္ကန်းချွတ် လူဝတ်လဲ ပြီး ဖာချနေကြတာ အခုလို လူမသိသူမသိဆို အရမ်းကြိုက်ကြတာ ဟီးဟီး နဲ့ ၇ီပြီများ ဆဲနေကြလား မသိဘူး... ဟိုဘက်ဘာသာ လှည့်ဆဲလိုက် ဒီဘက်လှည့်ဆဲလိုက် မည်းမည်းမြင်အကုန်ကိုက်တော့တာပဲ.. ဟီဟီ ခွေးရူးဘာသာ....
တချို့ က ကျွန်တော်ဘာရေးထားလဲဆိုတာ မဖတ်တော့ဘူး ရောက်လာတာနဲ့ တန်းဆဲတာပဲ... ရောက်လာကတည်းကိုက ဆဲဖို့လာတယ်.... တကယ်တမ်းမေးတော့ သူလည်း ဘာမှ မသိဘူး သိအောင် အရင်ဖတ်ပါ ဖတ်ပြီးမှ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်ထင်ကြေးပေးကြပါ.... တချို့ က အေးအေးဆေးဆေးဖတ်ရအောင် ဖြေရှင်းနိုင်အောင် ဆိုပြီး စီဘောက်ကို ထားတာတယ် ...
အခုကျွန်တော်ကြည့်ရတာ ဖတ်တာထက် ဆဲတာက ပိုနေတယ် နေ့တိုင်း ဆဲနေကြတော့ တွေ့ပြီ ကျွန်တော်လည်း စိတ်မချမ်းသာဘူး ဒါကြောင့် စီဘောက် ကို ဖြုတ်မယ်... ကွန်မန်းပေးနိုင်အောင် ကွန်မန်းပြင်ဖွင့်ပေးမယ် ဘာဘာသာက ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လာမပြောနဲ့ စိတ်မ၀င်စားဘူး အကုန်ဖျက်မယ်.... ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ အရာများရဲ့ အဖြေများရှိရင် ပေးကြပါ....
ကျွန်တော် ခင်ဗျားတို့ ပြောချင်တာ ခင်ဗျားတို့က တော်တော် မေးခွန်းများတယ် ဒါကြောင့်အားလုံး ဘာသာမဲ့ ခံယူလိုက်ကြပါ...ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်က ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အမှားအယွင်းများကို ဖော်ထုတ်ရုံသက်သက်ပဲ.။. ခင်ဗျားတို့ကို ဟိုဘာသာထဲဝင် ဒီဘာသာထဲဝင်ပါလို့ တ်ိတိကျကျမပြောခဲ့ဘူး ၀င်ချင်နေ မ၀င်ချင်နေဘဲ...ဘာသာမဲ့ ခံယူလိုက်ရင်တောင် ကျေနပ်ပြီ..... ကျန်ရှိတဲ့ ဘာသာတွေအားလုံးက ခင်ဗျားတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာထက် သာတယ်. အဆင့်အတန်းလည်း မြင့်တယ်. ပညာအရည်အချင်းနဲ့ပဲ ယှဉ်မလား လူဘောင်အဆင့်အတန်းနဲ့ပဲ ယှဉ်မလား.. လူဦးရေ အေ၇အတွက်အားဖြင့်ပဲ ယှဉ်မလား ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သန်းပေါင်း ၃၅၀ လေးပဲရှိတယ်....
ပညာတတ်နဲ့ပဲ ယှဉ်အုံးမလား အခု ခင်ဗျားတို့ ဂိုဂယ်ထဲမှာ List of Christian Scientists (ဒါမှမဟုတ်)Lists of Muslim scientists ဆိုပြီး ရှာလိုက် ပြီးသွားရင် တော့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အမွန်မြတ်ဆုံး အသန့်ရှင်းဆုံးနဲ့ စုတ်ပြတ်သတ်နေအောင် ကောင်းတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ရှာလိုက်ပါ.... List of Buddhism Scientists ဘယ်နှစ်ယောက် ခင်ဗျားတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ သိပ္ပံပညာရှင် ၇ှိမလဲဆိုတာ တွေ့လာရလိမ့်မယ်..(ဤနေရာတွင့် သက်ဆိုင်သော ဘာသာရေး အစွန်းရောက်များကို မဆိုလိုပါ) ငါတို့ဘာသာက သဘာဝကို လက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့် သိပ္ပံနဲ့ ကိုက်ညီတယ် မထင်နဲ့ သိပ္ပံပညာ၇ှုင်များရဲ့ အယူအဆက မမြင်ရရင်တော့ တွက်ချက်လို့ ဖြစ်နိုင်မဲ့ အရာမျိုး ကို လက်ခံပေးတယ်.....
ခင်ဗျားတို့ သဘာဝက ဖြစ်လာတယ်လို့ ခံယူထားတဲ့ ဘာသာဝင်တွေက ဘယ်ခရီးဝေးသွားချင်လဲ လမ်းလျှောက်ပြီး သွားမယ် သစ်ရွက်နဲ့ ထမင်းစားမယ် မိုးကောင်းကင်ပေါ်မှာ ပျံသန်းဖို့လည်း မစဉ်းစားတတ်ဘူး ရေတွေ့ရင် ကူးမယ် ဒီလောက်ပဲ နားလည်ကြတယ် အကုန်သဘာဝလက်ခံထားတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပဲ....
သိပ္ပံပညာအယူအဆများနှင့် သဘာဝကြောင့် ဖြစ်လာသည်ဟု မယုံကြည်ကြသည့်ဘာသာဝင်များကတော့ ကားနဲ့ မောင်းပြီး သွားမယ် လေယာဉ်နဲ့ မောင်းပြီး သွားမယ် သဘောင်္နဲ့ သွားမယ်ဒါမျိုး ရှိကြတယ်. . သဘာဝဆို ရင်လည်း ကောင်းအောင် ကျင့်ဖို့ လိုအုံးမလား အချိန်တန်သေသွားမှာပဲလေ... ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာ မမြင်ရလို့ သဘာဝကြောင့် ဖြစ်လာတယ်လို့ လက်ခံရင် နိဗ္ဗာန်ကြတော့ မမြင်ရဘဲ ဘာလို့ယုံလဲ.. နိဗ္ဗာန်ကို ဘယ်သူက သွားဖန်တီးလိုက်လဲ....ငရဲရဲ့ တည်နေရာကတော့ အစဖျောက်လိုက်ပြီ...
ခင်ဗျားတို့ သီဟိုဠ်က ဘုန်းကြီးတွေ တရားကျင့်တာ အရှေ့ကမ္ဘာတွေ နောက်ကမ္ဘာတွေမြင်တာ ငရဲ ကိုကြတော့ မြေကြီးအောက်မှာ ရှိပါတယ်လို့ ဘာလို့ ပြောရလဲ.. ငနာဘုန်းကြီးတကောင်က အတွေးမှားသွားရင်တောင် နောက်တကောင်က ငရဲက ဒီကမ္ဘာမြေကြီးအောက်မှာ ရှိတာ မဟုတ်ဘူးဆိုပြီ ဘာလို့ မပြင်နိူင်ခဲ့လဲ..... အခုကျုမှ သိပ္ပံက ထောက်ပြတော့မှ အာရွှီးပြီး ရေးထားတဲ့ အဋ္ဌကထာ စကားဆိုပြီး ဘာလို့ ဖျောက်လိုက်ရတာလဲ... ကျွန်တော့်ရည်ရွယ်ချက်က ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဖျက်ဆီးဖို့ပဲ..
ဘာကြောင့်လည်းဆို လူတွေကို မှော်တိုက်ပြီး ဒီမဟုတ်မမှန်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အသက်သွင်းနေလို့ပဲ.. အဓိကကတော့ ဘုန်းကြီးပဲ ဒီဂတုံးတွေ အပျင်းကျချင်လို့ လူတွေကို ဟိုလိုပြောလိုက် ဒီလိုပြောလိုက်နဲ့ ဟိုဘာသာက ဘာဖြစ်ညာဖြစ်တယ် သူ့စိတ်ကူးနဲ့ ရေးသားထားတဲ့ စကားတွေသြ၀ါဒတွေကို သွန်သင်ပို့ချ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူများကလည်း သြော်ဘုန်းကြီးပြောတာ အမှန်ပဲဆိုပြီး စိတ်ထဲမှာ မှတ်ယူပြီး ဒီပြင်ဘာသာတို့ရဲ့ လေးနက်မူကို မသိနိူင်ကြတော့ဘူး...
ခင်ဗျားတို့ကို ဘယ်ဘာသာကိုးကွယ်ပါလို့ ကျွန်တော်တခါမှ မပြောဘူး ဗုဒ္ဓဘာသာကတော့ လုံးဝမမှန်မကန်ဘူး စုတ်ပြတ်သတ်နေအောင် မှားယွင်းနေတယ်.. ခင်ဗျားတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာလောက် အဆင့်အတန်းမရှိ အောက်တန်းကျတာ ခင်ဗျားတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာပဲ ရှိတယ်.. ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကို ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဆဲတတ်ဆုံး အဆဲဆိုတတ်ဆုံး ဘာသာအဖြစ် ဆုချီးမြှင့် ပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ... အားလုံးပဲ လက်ခုပ်တီးပြီး အားပေးကြပါခင်ဗျာ....
အဆဲတတ်ဆုံး အဆဲဆိုတတ်ဆုံးဆုကို ကျွန်တော်(ကိုယ်တော်ချော)မှ ဆုချီးမြှင့်ပေးမှာ ဖြစ်ပြီး ဆုတတ်ယူရန် ငနာဘုန်းကြီး ဖားပပြုတ်ဝမ်းချုပ်မျက်နှာပိုင်ရှင် သီတဂူငနာက ဆုတတ်ယူရန် လေးစား စွာ ဖိတ်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ..
(မှတ်ချက်= ဂေါတာမ ရွှီးထားသောယုန်မင်းအား လကမ္ဘာပေါ်တွှုင် အမေ၇ိကန်နှင့်ရုရှား သွားေ၇ာက်ဖမ်းယူနေပါကြောင်း သတိပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ)